Dukaamada Online ayaa helay suuqa trending ah oo ah qaab DVD Player software u Mac users adduunka oo dhan, taas oo abuurtay fursad ganacsi loogu talagalay horumarinta barnaamijka dunida oo dhan kuwaas oo shati Apple ah. Si kastaba ha ahaatee, sida oo kale, waxaa jira Players tayada iyo Players u bursatay halkaas oo mid ka mid ah waxa loo xilsaaray inuu helo app ugu haboon baahida madadaalo ay, waxaa aad u badan yihiin in ay ka soo xusho oo sidaas daraaddeed article a soo koobay waa arrin ku habboon si loo badbaadiyo waqtiga. In this article, waxaad ka heli doontaa tobanka ciyaaryahan ee ugu dhab ah oo sare DVD ugu wanaagsan ee kombiyuutarada Mac.
Player Tani si raaxo leh ka ciyaari doonaa DVD-Videos oo kuu ogolaanaya in aad bedesho dadajiyaa heerka sare, sida ugu badan ee 200% iyo garoonka si +/- 2 semitones, halka weli waqti isku mid kuu ogolaanayaa inaad la yareeyo iyo in la kordhiyo video ama dhawaaq soo saarka iyo waa fiican u arkaysid Casharrada iyo DVDs qoob ka ciyaarka. Waxa uu ku siinayaa sida ugu fiican ee loo maqli karo, waayo, DVD-yada aan ganacsiga iyo ganacsi, halka ciyaarta shaashad buuxda. Miyuu barbaraha ka dhisay-in dhawaaqa iyo menu xulashada fursado DVD aad. Qaraarka oo tayo leh codka iyo sawirka waa Ilaag. Waxay u baahan tahay PC casri ah oo degdeg ah oo waa la jaan qaada Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.8 oo ah versions kale oo dhowr ah.
Player Tani waa arrin sahlay in si kasta oo ka kontaroolada in loading ee DVD-Video for kuwa doonaya in ay la kulmaan madadaalo aan inta badan gumaarka ah. Waxaa la xakameyn karaa iyadoo la isticmaalayo jiirka ama gacanta ku sahanka ay ku-guddiga. Marka on shaashad buuxda, waxaad si fudud u heli karin bar screen menu haddii aad guji sare ee shaashadda. Waxa ay u ogolaataa resizing ee shaashadda si ay u fushadaan laguugu sahlo, dib u socon / degdeg ah weeraryahanka, joojin, shid subtitles / off iyo waxyaabo badan oo hawlaha oo kale oo ka.
Isticmaalka Player ku noqon karaan wax yar adag in waqti user hore sababtoo ah ma aysan si toos ah u akhri DVD haddii aad raacdo Dardar iyo ugu danbeyn aad DVD-Video diyaar u ah inay u arkaan oo ay sidoo kale menu DVD ah karti. Waxa loo baahan yahay wax badan oo ka mid ah gujinaya laakiin waxa ay sidoo kale waxaa u tacsiyaynaysay in la ogaado in ay ka akhrisan kartaa HD iyo / ama Blu-Ray cajalladaha iyo waqti isku mid noqon dabacsan oo la qaadi karo. Waxaa ay taageerayaan OS Mac ka X.
Mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo fududahay in la isticmaalo Players Mac in uu leeyahay interface soo jiidasho leh, oo dhulkii oo oo u fudud in ay maraan. Waxaa DVDs ka disk ama DVD cajalladaha deegaanka ka akhrisan kartaa. Dhufto ee ay yihiin Mac OS X 10.3.9 iyo / ama qoraalkii ka dib.
Si aad ku raaxaysan Player this oo si buuxda u isticmaali, waxaad u baahan doontaa in ay u qotomiyey sidii aad default Player u DVD ee Mac. Taas oo uu sheegay, waxay dedejisaa awoodaha hardware aad halka sidoo kale waa awood ku filan inuu u ciyaaro videos qeexitaanka sare. Waxaa si toos ah uga furmay qaar ka mid ah DVD-yada, laakiin qaar baa u baahan doonaa menu oo jirtey in laga heli. Mid ka mid ah dib u dhac ay ku yahay waxa ay u baahan doonaan khayraadka nidaamka sare.
Hal dhibic oo ay u fiiriyaan dadku ku kor ka hor inta doorashooyinkan waa xaqiiqda ah in marka aad soo dajiyo MPlayerOSX, ku timaadda SMPlayer sida app caan ah dhamaadka. Player Waa qaybinta binary ee MPlayer oo waa mid ka mid ah kuwa asalka ah ee Mac OS X, sidaa darteed ku dul rakibo waxaa ku siinayaa farsamooyinkooda fudud xarfad sida jiita iyo hoos u xataa la barnaamijkaaga on shaashad buuxda ama hab uu furmo suuqa oo, dhan ciyaara ee aad sahlanaato u gaar ah. Its video waafaqsan waa lagu naalloon karo, waa miisaanka yar oo arrin aad u wanaagsan marka la barbar dhigo Players kale Mac. Its madal waa Mac OS X 10.5 iyo versions kale ka dib.
Haddii aad u isticmaashay oo ku riyaaqay isticmaalaya wmv iyo / ama WMA, markaas waxa ay noqon doontaa wax u dhigma daacad iyo waxtarka sidii loo ansaxiyay Microsoft sida wmv ee Mac. Version cusub 3.0 waa kaliya version Libaaxa socon ee Mac. Waxay leedahay ikhtiyaar ah si loo soo dajiyo Microsoft ee u dhigma ee Adobe Flash, Silverlight, taas oo aan lagama maarmaan ah si loo soo dajiyo laakiin aad u baahan tahay in tan iyo markii qaar ka mid ah geeyo video ah content live u baahan tahay in lagu bixiyo. Waxay leedahay muujinta a arag darnaayeen light oo dims nuurka ku saabsan asalka iyo meelaha aad video agagaarka si aad uga bogato kaamil ah video daawado.
App waa wax fudud u isticmaala Mac si fudud u helaan ay cajalladaha Blu-Ray oo badan oo kale video files. The film iyo wax soo saarka dhawaaqa waa mid wanaagsan ma jiro waa taxriifin yar ama rabshooyin ee Streaming ka. Wixii dunida file muuqaal ah tani waxay noqon lahayd arrin la yaab leh. Magaca dhiibo Player sida app kooban, laakiin waxa dhab ahaan taageeri karaan aqlabiyad ah qaabab ka, la magacaabo wax yar; MKV, AVI, MP4 iyo MTS. Waxa kale oo la Timaadda siyaada ah sida xawaaraha loading sare oo aad ku badbaadin karto Screenshot aad qaabab default sida jpeg iyo BMP.
Sidoo kale loo yaqaan Player for Mac Flash ah, waxaa u ciyaara files Flash iyo FLV aad PC, inaad sameyso oo dhan waa ku shuban files waxa uu galay interface, dib u fadhiisan oo ha Player aad maalin. Isticmaalka Player ku siiyo siyaabo kala duwan oo aad ku darto files ka dayanayaan dhajinta URLs galay app in ay gacanta ku daray files kuu gaar ah oo. Sida looga gudbo dhex Player waa sida sahlan oo la qasabno yar oo sahlan oo aad leedahay waxa aad rabto.
Doorashada A ganaax u soo diyaariyeen balaadhan oo ah qaabab ay ka mid yihiin Blu-Ray, DVD, image ISO files 3D iyo non-3D video files. Waxaa keenayaa madadaalo aad PC daray boorish dhawaaq wanaagsan saamaynta video cajiib ah si aan u weyneyno waayo aragnimada aad ka daawan. Haddii aad raadinayso ugu fiican Blu-Ray Player markaas eegi jirin dheeraad ah, Player waxay bixisaa baahidaada qalab jiho si buuxda u shaqaysa oo xoog leh oo kaliya in ay kugu habboon. DVDFab ayaa Player waa wax walba, haddii aad u baahan tahay taageero buuxda inta badan ka mid ah qaabab iyo madadaalada tayada ugu fiican.
In kastoo kulligood waa u faa'iido badan ee DVD caashaqi jiray, haddii aad raadinayso DVD ah u fududahay in la isticmaalo Player oo taageeri karaan dhammaan noocyada kala duwan ee iyo wixii soo baxayey qaabab xawaare sare. Qaado Wondershare Player tixgeliyaan. Download version ku raad free hoos ku qoran.
Top 10 DVDStyler lagu bedelan karo (Windows iyo Mac)
Sida loo dar subtitles in DVDStyler
Hel TS Converter u Mac si loogu badalo TS on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Pinnacle Studio for Mac - fududahay in la isticmaalo Video Editor for Mac
> Resource > Mac > Top Toban DVD Best Players u Mac